***သားမက်ကောင်းလေး ရထားတယ်*** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ***သားမက်ကောင်းလေး ရထားတယ်***
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Jul 25, 2011 in Aha! Jokes, Satire |9comments
အိမ်အလုပ်လဲ ဘာမှ ၀ိုင်းကူပြီးမလုပ်ဘူး။ထမင်းစားသောက်ပြီးရင် အိမ်ရှေ့ ခန်းမှာ သေချာတင်ပလ္လင်ခွေ ထိုင် သူ့ လက်နဲ့ မေးစေ့ အောက်က မုတ်ဆိတ်မွေး ရေးရေး ကိုလက်နဲ ပွတ်ပြီး တစ်ခုခုကိုခေါင်းတညိတ်ညိတ် နဲ့ တွေးနေတာ ကို သူကြီးကတော် က မိန်းမပီပီ လက်ကြောမတင်းတဲ့ သားမက်ကို တော်တော်လေးအမြင်ကတ်လာတာနဲ့ …
သူကြီးကတော်လဲ…ဘုမသိ ဘမသိ နဲ့ “သြော်..အဲ့ဒီလိုလား…”
“သားရေ….မင်းကို အဖေ ကြည့်နေတာ ကြာပြီ မင်းစားသောက်ပြီးတိုင်း တစ်ခုခုကို ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ စဉ်းစားနေတာ တွေ့ တယ်ကွ.ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ။
အဲဒါနဲ့ သားမက်က သူ့ လက်နဲ့ မေးစေ့ကိုပွတ်ပြီး သူကြီးကို ပြန်ပြောလိုက်တာက…
“သြော်…ဒီလို အဖေရ..ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာက..ဟော့ဒီ မုတ်ဆိတ်မွေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေး ဟာ ဆံပင်ရဲ့ရေသောက်မြစ် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကို သေချာအောင် အဖြေထုတ်နေတာပါ”
“ ဟေ….မင်း လနဲ့ ချီပြီး ထိုင်စဉ်းစားနေတာ စီးပွါးရေးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလား..”
“မဟုတ်ဘူး အဖေ….မုတ်ဆိတ်မွေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေးဟာ ဆံပင်ရဲ့ ရေသောက်မြစ် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကို အဖြေထုတ်နေတာပါ”
ချမ်းချမ်းကတော့..ရွာသူ တုံးတုံးအအ လေးမို့ သိလဲသိဘူး ဖြေလဲဖြေတတ်ဘူးတော့…..
တော်တော်လေးကို ပေါက်ကရတွေးတဲ့ သားမက်ကောင်းလေးပဲနော့…
Written…By…. ချမ်းချမ်း(ရွာသူလေး) http://www.haymonchan.blogspot.com
ဘာအလုပ်မှမလုပ်ချင်ဘဲ အရမ်းပျင်းတဲ့သားမက်တစ်ယောက် မိုးရာသီအချိန်မှာ ယောက်ခမတွေကိုအမြဲတမ်း သတိပေးထားတာက ညဘက်မိုးရွာရင် သူ့ ကိုနှိုးပါတဲ့.. ယောက်ခမတွေအထင်တော့ ညဘက် ငါးဖားထွက်ရှာလေမလားရယ်ပေါ့
တစ်ည သားမက်ပျင်းကို မိုးရွာတဲ့အချိန်နှိုးလိုက်တော့ သကောင့်သားက ဆေးပေါ့လိပ်နဲ့ မီးခြစ်ရှာပြီး ပုဆိုးခြုံလေးနဲ့မိုးရွာနေတာကိုကြည့်ရင်း ယောက်ခမတွေကိုပြောလိုက်တာက “ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် အဖေနဲ့ အမေ.. ဒီလိုညဘက်မိုးရွာနေချိန် ဆေးလိပ်သောက်ရတာ အရမ်းဇိမ်ရှိတာဘဲ” တဲ့
ချမ်းချမ်းရေ ရေးမြိူ့နယ်ကတိုးတက်နေပါပြီ။ချမ်းချမ်းဆိုတဲ့နံမယ်ကိုတော့ မြန်မာလိုမပြန်ပေးတော့ပါဘူး။နယ်က ခေါဇာ၊ လမိုင်း တို့ဟာမြို့နယ်တွေဖြစ်နေကြပါပြီ။အရင်ကထက်စာရင် အဆပေါင်းများစွာငြိမ်းချမ်း တိုးတက်နေပါပြီ။အားလုံးလဲ ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ဖွံဖြိုးနေကြပါပြီ။
ချမ်းချမ်းရေ… မွန်လို “ အိုးတစ်ခြမ်းပဲ့ ” ဆိုတာ ဘာလဲဟင်?
သင်္ဘေင်္ာသား သမက် ဆိုတဲ့ ပုံပြင်သိလား..
သင်္ဘောသား ဆိုတာ ရေထဲ ဆင်းတဲ့ အမျိုးမဟုတ်ပဲ သင်္ဘောသီး သီးတဲ့ သင်္ဘောသား.. ထင်းစိုက်လို့မရ.. အားပြုလို့ မရ.. အခေါင်းပွ နဲ့ အစိုဓါတ်များနေလို့.. အသုံးမကျတာကို ပြောချင်တာ။
အင်း စဉ်စားတာကလဲ အရမ်းကိုအကျိုးရှိမဲ့ဟာ ဆိုတော့သူကြီးသနားပါတယ်
အိုးတစ်ခြမ်းပဲ.ဆိုတော. အပြည်.မဟုတ်လို.ပေါ.ဗျာ ဟဲဟဲ
သဂျီးက သူ့သမီးလိုချင်ရင် သိပ္ပံနည်းကျ ရုပ်ဝါဒီစစ်စစ်ဖြစ်ရမတဲ့… ကြောင်ကြီးကလည်း အသက်အသေခံမယ် ဒီလိုလူမျိုးကို ယောက္ခထီးခေါ်ဘူး….. :mad:
ဒီသူကြီးက အရူးမကိုလူလည်လုပ်သွားတဲ့ ဟိုသူကြီးနဲ့များ ကွာပ